ကိုကြီးကျော် (IT Reshare)
Deep Freeze Standard Edition v7.71.020.4499 Final | Full version
အားလုံးသိပြီးသားပဲဖြစ်မှာပါ... နောက်ဆုံးထွက်လေးမို့ လို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Full version ပါ Serial ပါပါ တယ်.
Download Deep Freeze Standard Edition v7.71.020.4499 Final | Full version
Rar Password : majalahsoftware.com
SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC (SD Card တွေ Format ချမရရင်)
ဒီ Solftware လေးကတော့ အကြောင်းအျမိုးမျိုးကြောင့် SD Card တွေ Format ချမရရင် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်...။
ဂီတစာဆို လွှမ်းပိုင် - လွှမ်းပိုင်
ဂီတစာဆိုလွှမ်းပိုင် - လွှမ်းပိုင် Download Listen
Beautiful Download Listen
ကျိန်စာ Download Listen
ကိုကို - Feat: အိမ့်ချစ် - Bobby Soxer Download Listen
မင်းရဲကျော်စွာ ဗိုလ်နေတိုး Download Listen
သူငယ်ချင်းသို့ပေးစာ Download Listen
အသက်သွင်းပေးပါ Download Listen
လက်တွေမြှောက် - Feat: Bobby Soxer Download Listen
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် Download Listen
ကောင်လေးတယောက်ရဲ့ ကောင်မလေး - Feat: Bunny Phyoe Download Listen
Disco Download Listen
ရုပ်ဆိုး Download Listen
ဘော်ဒါမကောင်းသူကောင်းမဖြစ် - Feat: ရဲရင့်အောင် Download Listen
The Whole Burma First - Feat: Lil Z Download Listen
မာလကီးယား Download Listen
တစ်ခါက တက္ကသိုလ် Download Listen
VA - City FM 12th Anniversary (2014) [Album]
၀၁။ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ - ကျော်သီဟ၊ ခင်စုစုနိုင်၊ မို့မို့လွင်
၀၂။ အချစ်ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့ - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
၀၃။ မမျှော်လင့်ဘဲ - ဖြူဖြူကျော်သိန်း
၀၄။ ဇွတ်ချစ်မယ် ဘယ်နေ့လဲ - ဂျက်ဆန်ထွန်း
၀၅။ ကမ္ဘာတစ်ဖက်ဆီသို့ - မိစန္ဒီ
၀၆။ အရိပ်တစ်ခုပိုင်ဆိုင်ခြင်း - နီနီခင်ဇော်
၀၇။ ဘယ်လောက်ဝေးဝေး - Rဇာနည်
၀၈။ နေရာချင်းသာ လဲလိုက်ချင်တယ် - အိမ့်ချစ်၊ အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်
၀၉။ ညို့ယူဖမ်းစား နှလုံးသားသံစဉ် - ချမ်းချမ်း
၁၀။ ကာရန်မညီသော - Lလွန်းဝါ၊ ဗန်းသော့ဒ်ကျင်း
၁၁။ နိုင်ငံတကာ ရင်သွေးငယ်များ - ထက်နေခြည်၊ ဖြိုးပြည့်စုံ၊ ထက်အောင်၊
VA - City FM 12th Anniversary (2014) [Album] [51MB]
Mediafire= [Download Whole Album]
Miloshare= [Download Whole Album]
Zippyshare= [Download Whole Album]
Solidfiles= [Download Whole Album]
Sharebeast= [Download Whole Album]
SendMyWay= [Download Whole Album]
indishare= [Download Whole Album]
Tusfiles= [Download Whole Album]
Rockdizfile= [Download Whole Album]
♪ Phone ထဲမှာ မှားဖျက်မိတာတွေအားလုံးပြန်ယူပေးနိုင်တဲ့ - DiskDigger Pro (root) v0.998 APK ♫
Android User တွေအတွက် Data Recovery Application တစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ Data Recovery ဆို တာမျိုးက Computer မှာတင်မဟုတ်ဘဲ Phone တွေမှာလည်းရှိထားသင့်တဲ့ Application တစ်မျိုးပါ။ DiskDigger Pro ဆိုတဲ့ Recovery လေးက ဖုန်းထဲမှာမှားဖျက်မိတဲ့ Photo , Music , Movies , Ebook , Apk , နှင့် အခြား Data တွေကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ပြန်လည်ရှာပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ အခုDiskDigger Pro ကိုအသုံးပြု ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖုန်းမှာ Root ဖောက်ထားဖို့လိုပါတယ်ဗျာ။ Android OS 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းများမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Recovery ယူပေးနိုင်မယ့် File Type တွေကတော့ အောက်မှာအသေးစိတ်ရေး ထားပါတယ်ဗျာ။
DiskDigger recovers the following file types:
JPG, PNG, MP4 / M4A / 3GP / MOV, GIF, MP3, AMR, WAV, TIF, CR2, SR2, NEF, DCR, PEF, DNG, ORF, DOC / DOCX, XLS / XLSX, PPT / PPTX, PDF, XPS, ODT / ODS / ODP / ODG, ZIP, APK, EPUB.
Download From Main Page >>
သုတ ၊ ရသ စာအုပ်များ
Download လုပ်နည်းများ (1)
FIFA-14 WorldCup (1)
Handmade Software (1)
HardDisk Repair (1)
IT ဗဟုသုတ (20)
IT သတင်းများ (3)
Mobile Knowledge (11)
Myanmar Hosting (1)
Online Dota (1)
Online Earning Money (2)
Online ကနေငွေရှာနည်း (2)
TuneUp Softwares (1)
Zapya For PC (1)
Deep Freeze Standard Edition v7.71.020.4499 Final ...
SD Formatter 4.0 for SD/SDHC/SDXC (SD Card တွေ For...
Hard Disk အမျိုးမျိုးက Drive Errors တွေကို ပြင်ချင...
NotePadကိုသုံးပြီး သင့်ဝင်းဒိုးကို Genuine ဖြစ်အော...
MM First Aid App for iPhone
Dahma တရားတော် Software
Copyright © 2011 ကိုကြီးကျော် (IT Reshare) | မူပိုင် IT Ko Gyi Kyaw